» नकाउटमा टिम दिपबाट को हुनेछन् उत्कृष्ट ३ प्रतियोगीहरु ?
नकाउटमा टिम दिपबाट को हुनेछन् उत्कृष्ट ३ प्रतियोगीहरु ?
मकवानपुर, १७ जेठ । चर्चित गायन रियालिटी शो ‘द भोईस अफ नेपाल सिजन ३’ को नकाउट राउण्डमा अन्य कोचहरुसँग जस्तै कोच दिपको टिममा पनि ९ जना प्रतियोगीहरु छन् । अब टिम दिपका ९ जना प्रतियोगीहरु नकाउट राउण्डमा ३–३ जनाको समूहमा आफ्नै टिमका प्रतियोगीहरुसँग भिड्नेछन् । आफ्नै टिमका प्रतियोगीसँग भिडेर जित हासिल गरेका ३ जना प्रतियोगी मात्र लाईभ राउण्डमा प्रवेश गर्नेछन् भने ६ जना बाहिरिने छन् । कोच दिपको टिमबाट सुजिता योञ्जन, ईशान राई, जेनिश राई, गोविन पून, प्रिया गुरुङ, विजय भण्डारी, सुनिल थापा मगर, आर्यन तामाङ र स्टिलबाट आएका कुशल श्रेष्ठले नकाउटमा भिड्नेछन् । यस भिडियो सामग्रीमा कोच दिपको टिमबाट नकाउट जित्दै लाईभमा जानसक्ने प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । तपाईको विचारमा यी प्रतियोगीहरुमध्ये कुन प्रतियोगीहरु नकाउट जित्दै लाईभमा जालान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । द भोईस अफ नेपाल सिजन ३ को अन्य भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
कोच दिपको टिममा ब्लाईण्ड अडिसनमा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल ४ जना बलिया प्रतियोगीहरु पनि छन् । जेनिश राई, गोविन पून, सुनिल थापा मगर र स्टिलबाट आएका कुशल श्रेष्ठले ब्लाईण्ड अडिसनमा चारै जना कोचहरुलाई आफूतर्फ फर्काउन सफल भएका थिए । साथै उनीहरुले ब्याटलमा पनि तहल्का मच्चाएका थिए । त्यसैले नकाउट जित्ने सम्भावना यी प्रतियोगीहरुको बलियो देखिन्छ । २३ वर्षीय जेनिश धरानका हुन् । उनी गायनकै कारण चर्चामा छन् । बुटवल निवासी गोविन पून ब्लाईण्ड अडिसनमा पर्दासँगै ईन्ट्री भएदेखि नै चर्चामा छन् । उनको आवाजलाई निर्णायकहरुले निक्कै रुचाउँदै उनलाई फाईनलमा पुग्न योग्य प्रतियोगीका रुपमा त्यसैबेला चर्चा गरेका थिए । नुवाकोटका २९ वर्षीय सुनिल थापा मगर सानैदेखि साँगितिक क्षेत्रमा हुर्किएका कारण बलिया प्रतियोगीका रुपमा चर्चामा छन् । त्यस्तै स्टिलबाट कोच दिपको टिममा आएका कुशल श्रेष्ठ दमदार र बलिया प्रतियोगीका रुपमा देखिएका छन् । स्टिलबाट छानिएकै कारण उनी साँगितिक रुपमा अझ बलियो छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । ३१ वर्षीय कुशल पाल्पाका हुन् ।
त्यस्तै ब्लाईण्ड अडिसनदेखि नै चर्चामा रहेका अन्य ५ जना प्रतियोगीहरु पनि कोच दिपको टिमका गहना हुन् । सुजिता योञ्जन, ईशान राई, प्रिया गुरुङ, विजय भण्डारी र आर्यन तामाङ पनि नकाउटमा जितेर लाईभमा पुग्नसक्ने बलिया दाबेदारहरु हुन् । रामेछापकी १८ वर्षीया सुजिता योञ्जन सँगीत विषयमै अध्ययन गरिरहेकी बलिया प्रतियोगी हुन् । खोटाङका ईशान राई पनि संगीतमा उस्तै उम्दा छन् । सँगीत क्षेत्रमा लाग्न आफ्नो जीवन नै दाउमा लगाएकी पोखराकी २४ वर्षिया प्रिया गुरुङ नकाउटका बलिया दाबेदार हुन् । यसअघि नै विभिन्न रियालिटी शोहरुबाट चर्चा पाईसकेका चितवनका ३० वर्षीय विजय भण्डारी पनि लाईभमा पुग्न कम्मर कसेर लागेका छन् । उनले ४ वर्षसम्म संगीत पनि सिकेका छन् । त्यस्तै दार्जिलिङका १९ वर्षीय आर्यन तामाङमा पनि लाईभमा पुग्न कडा परिश्रम गरिरहेका छन् । यी ९ जना प्रतियोगीहरुको गायन र आवाजका कारण उनीहरु सबै जना लाईभमा पुग्न योग्य प्रतियोगीहरु हुन् भनेर दाबी गर्न सकिन्छ तर शोको फर्म्याटका कारण यीनीहरुमध्ये ३ जनामात्र अगाडि बढ्नेछन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–